Kulliyadaha Sare ee Technology - Study dibadda ee Imaaraadka
Kulliyadaha Sare ee Technology
Kulliyadaha Higher of Technology Details
gaabinta : Kooxda Bani'aadamnimada
aasaasay : 1988
Ha iloobin in aad wada hadlaan Kulliyadaha Higher of Technology
Qorto Sare ee Kuliyadaha of Technology
Nidaamka of Higher Kulliyadaha ee Tiknoolajiyadda Casriga (Kooxda Bani'aadamnimada) waa beesha ka mid ah wax ka badan 23,000 ardayda iyo 2,000 shaqaalaha ku salaysan 17 casri ah, xarumood technology-wanaajiyey ee Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Fujairah, Madinat Zayed, Ras Al Khaimah, Ruwais iyo Sharjah, yelsinkii hay'ad waxbarasho sare ugu weyn ee Imaaraadka.
la aasaasay 1988 by Qadarka Federaalka Bani'aadamnimada ayaa si degdeg ah horumariyo halkaas oo uu leeyahay sumcad wanaagsan u-ixtiraamo, waayo cusub iyo gacan-ku-, hababka barista iyo barashada la xiriira goobta shaqada, taas oo ku salaysan yihiin wax ku ool ah, waxbarashada khibrada.
Sare ee Kuliyadaha of Technology waxay bixisaa badan oo kala duwan, shaqo-ku haboon, barnaamijyada ee Isgaarsiinta Applied English-baray, Ganacsiga, Computer & Science Information, Engineering Technology & Science, Sciences Caafimaadka iyo Waxbarashada ee heerarka kala duwan. Dhammaan barnaamijyada waxaa loogu talagalay in la tashanaya hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo warshadaha si loo hubiyo xirfadaha ardayda 'yihiin shaqo-ku haboon iyo in heerarka ugu sareeya.
Ardaydu waxay bartaan in a teknoolajiyada casri ah, deegaanka e-waxbarasho oo dhiirigelineysa horumarinta xirfadaha waxbarasho oo madax banaan iyo nolol-dheer.
qalin Kooxda Bani'aadamnimada ayaa sugi la raadinayo shaqeeyayaasha maadaama ay yihiin awood u shaqaynayo si tayo leh in maanta jawiga ganacsiga caalamiga ah. In ka badan 60,000 aqoonsiga tacliinta ayaa loo dhigay in ay ka qalin-tan 1991.
Kooxda Bani'aadamnimada ayaa la aasaasay xiriirka firfircoon shirkadaha UAE iyo ururada iyo jaamacadaha dunida hoggaaminaysa iyo ururada.
Sare ee Kuliyadaha ee Technology waa hay'adda horseedka codsatay waxbarashada sare ee awood ab ku dhiirrigeliney in ay qaabeynta mustaqbalka ee Imaaraadka.
Bixi tacliinta sare codsatay in ay qalabeeyaan ab la aqoon, xirfadaha iyo kartida in la kulmo heerarka caalamiga ah iyo baahida mustaqbalka ee warshadaha UAE iyo bulshada.
Computer & Science Information
In 1985, H.E. Sheikh Nahayan Al Nahayan Mabarak, Chancellor of United Arab Emirates Jaamacadda, sameeyeen dadaal lagu dhiso nidaam cusub oo waxbarashada post-sare ee UAE Muwaadiniinta in ay ku adkaysato lahaa hadafyada ee wax soo saarka, aayo-ka iyo haybaddii.
Mudane himilada nidaam ee ugu tayada sareeya in loo isticmaali doono si loo baro Muwaadiniinta ah ee shaqooyinka xirfadeed iyo farsamo loo baahan yahay in bulshada si degdeg ah horumarinta.
In dhammaystirka aragti in, Sare ee Kuliyadaha ee Technology (Kooxda Bani'aadamnimada) waxaa la aasaasay sannadkii 1988 by Law No Federaalka 2 soo saaray ku Marxuum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, naftiisa u nastaan ​​nabad.
Afar kulliyadaha bilowdey sanadkii in. Tan iyo markaas, saddex iyo toban kulliyadaha dheeraad ah iyo Center of Excellence for Applied Research and Training (CERT) furay oo dhan Emirates Stadium si ay u sameeyaan nidaamka of Higher Kulliyadaha ee Technology.
Ma rabtaa wada hadlaan Kulliyadaha Higher of Technology ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Kulliyadaha Higher of Technology on Map
Photos: Kulliyadaha Sare ee Technology rasmiga ah Facebook
Kulliyadaha Sare ee dib u eegista Technology
Ku biir si ay ugala hadlaan of Higher Kulliyadaha of Technology.